Adiyisɛm 20 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
Yohane Adiyisɛm 20:1-15
Wɔkyekyeree Satan mfe 1,000 (1-3)
Wɔn a wɔne Kristo bedi hene mfe 1,000 (4-6)
Wobeyi Satan, na wɔasɛe no (7-10)
Wobuu awufo atɛn wɔ ahengua fitaa no anim (11-15)
20 Mihui sɛ ɔbɔfo bi fi soro resian a okura amoa donkudonku no ano safe+ ne nkɔnsɔnkɔnsɔn kɛse bi wɔ ne nsam. 2 Na ɔkyeree ɔwɔ a ne ho yɛ hu*+ no, ɔwɔ dedaw+ no, nea wɔfrɛ no Ɔbonsam+ ne Satan+ no, na ɔkyekyeree no mfe 1,000. 3 Na ɔtow no kyenee amoa donkudonku+ no mu, na ɔtoo no mu sɔɔ ano sɛnea ɛbɛyɛ a ɔrentumi nkɔdaadaa amanaman no bio kosi sɛ mfe 1,000 no bɛba awiei. Eyi akyi no, ɛsɛ sɛ wogyaa no kakra.+ 4 Na mihuu nhengua, na wɔn a wɔtete so no, wɔmaa wɔn tumi sɛ wommu atɛn. Yiw, mihuu wɔn a Yesu ho adanse a wodii ne Onyankopɔn ho asɛm a wɔkae nti wokunkum* wɔn no akra,* ne wɔn a wɔansom akekaboa no anaa ne honi no na wɔannye ahyɛnsode no wɔ wɔn moma so ne wɔn nsa ho+ no. Na wɔbaa nkwa mu, na wɔne Kristo dii ade+ mfe 1,000. 5 (Na awufo a aka no+ amma nkwa mu kosii sɛ mfe 1,000 no baa awiei.) Eyi ne owusɔre a edi kan+ no. 6 Anigye ne kronkron ne obiara a onya owusɔre a edi kan+ no mu kyɛfa; eyinom na owuprenu+ nni wɔn so tumi.+ Mmom wɔbɛyɛ Onyankopɔn ne Kristo asɔfo,+ na wɔne no* bedi hene mfe 1,000.+ 7 Na sɛ mfe 1,000 no ba awiei pɛ, wobeyi Satan afi n’afiase hɔ, 8 na obepue akɔdaadaa saa aman a ɛwɔ asaase afanan no, Gog ne Magog, na waboaboa wɔn ano ama ɔko no. Eyinom dodow te sɛ mpoano anwea. 9 Na wɔkɔɔ asaase no so baabiara, na wotwaa akronkronfo no asoɛe ne kurow a wɔdɔ no no ho hyiae. Na ogya fi soro bae, na ɛbɛhyew wɔn.+ 10 Na wɔtow Ɔbonsam a na ɔredaadaa wɔn no too ogya tare a sɔfe* wom no mu, baabi a akekaboa+ no ne atoro diyifo no wɔ dedaw no;+ na wɔbɛyɛ wɔn ayayade* awia ne anadwo daa daa. 11 Na mihuu ahengua kɛse fitaa bi ne Nea ɔte so no.+ Asaase ne ɔsoro guan fii n’anim,+ na wɔannya baabiara amma wɔn. 12 Na mihuu awufo, akɛse ne nketewa, sɛ wogyinagyina ahengua no anim, na wobuebuee nhoma mmobɔwee mu. Na wobuee nhoma mmobɔwee foforo mu; ɛno ne nkwa nhoma mmobɔwee+ no. Na wɔde nsɛm a wɔakyerɛw wɔ nhoma mmobɔwee ahorow no mu no buu awufo no atɛn sɛnea wɔn nnwuma te.+ 13 Na ɛpo yii awufo a ɛwom mae, na owu ne Ɔdamoa* yii awufo a ɛwom mae, na wobuu wɔn atɛn mmaako mmaako sɛnea wɔn nnwuma te.+ 14 Na wɔtow owu ne Ɔdamoa* guu ogya tare+ no mu.+ Saa ogya tare no ne owuprenu+ no. 15 Afei nso, obiara a wɔanhu no* wɔ nkwa nhoma+ no mu no, wɔtow no too ogya tare no mu.+
^ Nt., “wɔde abonnua kunkum.”
^ Hwɛ Nkyerɛkyerɛmu afã hɔ ne Adi 6:9 ase hɔ asɛm no.
^ Kyerɛ sɛ, Kristo.
^ Anaa “wɔde wɔn begu afiase.”
^ Anaa “wɔanhu sɛ wɔakyerɛw ne din.”